Enezinkinga lesizalo ukopha zihlanganisa iqembu ngokwanele enkulu ukopha ngesikhathi anovulatory umjikelezo. Bona kwenzeke ngaphandle nge-ovulation, i-luteum Corpus engekho. kuphakamisa wabo ocasulayo futhi aphikelele follicle. Futhi umphumela eside estrogen senzo.
Aphikelele follicle libhekene impumelelo eyodwa noma ngaphezulu follicle nokuvuthwa ezithile. Nokho, akukho-ovulation kanye kumiswa luteum Corpus. Ubude follicle ngesikhathi esifanayo kwezinyanga ezimbalwa futhi sihambisana ukukhiqizwa amanani abalulekile hormone estrogenic.
Ukuphumelelisa simo ingahlala kusuka eziyisikhombisa ukuba ezinsukwini eziyisishiyagalombili. Ngemva kwalokho kuthola izinguquko uhlamvu kwamaciko kanye nokunciphisa amazinga estrogen emzimbeni. ukwehla kwama-hormone kuphakamisa iziyaluyalu ebhubhisayo endometrium futhi opha efana ukopha esesikhathini. Aphikelele isikhathi eside kwe-follicle senzeka lihambisana nokubambezeleka of menses (kwezinye izimo amasonto amaningana) ukopha esindayo isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, isimo kuhambisana fibrosis Hyperplasia yezindlala we endometrium. Lolu hlobo lwe-ukopha uvame ezitholakele preklimaktericheskom kanye nobudala engamahlongandlebe.
ukopha Juvenile zokhahlamba kusuka emihlanu kuya amaphesenti ayishumi azo zonke izimo. Bona kwenzeke phakathi nokuvuthwa ongaphelele nocansi ne nokuntengantenga we umjikelezo wokuya esikhathini. Emantombazaneni nambili nane anovulatory umjikelezo lubonakala njengosuku 60% amacala iminyaka eyishumi nanhlanu seventeen - 43% futhi kusukela engu-18 kuya ku-20 - 27%.
Follicle atresia ephelezelwa ukukhiqizwa eside estrogens. Nokho, inani labo elincane. Okuqhubekayo estrogen okuqukethwe libhekene iphakama kuphakamisa Hyperplasia we endometrium. Lapho lolu shintsho itholwa ithoni semithambo, okuyinto kuphazamisa e ukuzungeza ukopha endometrial nesenzakalo of necrosis. Ngokuvamile, iluphu ukubambezeleka kulesi simo okuhlala ezinengi kunomuntu ezihambisana follicle ukuphikelela.
Kukho kokubili lokhu kuhlola uthi ikhonjwe anovulatory ukopha, kwenzeka ngokuvamile ngemuva kokulibaziseka kokuya esikhathini, engahlala izinsuku ezimbalwa futhi amasonto ayisithupha noma ayisishiyagalombili noma izinyanga ezimbalwa. Lapho kukhona aphikelela ukopha esindayo, kodwa zimfushane.
Ukuhlonza Ukugula anovulatory ukopha Kwenziwa ucabangela ngezizathu emitholampilo endocrine izifundo. Ukuphikelela libhekene lokushisa basal ngezansi 37º, ephezulu (50-100 mg / usuku) estrogens. Lokhu kuveza amazinga aphansi pregnanediol.
Atresia ephelezelwa ongaphakeme basal lokushisa njalo. Kulokhu, kukhona ngokulinganisela urinary estrogen excretion futhi pregnandiol encishisiwe.
I kwamangqamuzana kwesifo senziwa nge organic imvelo lesizalo izifo (umdlavuza lesizalo, umdlavuza wesibeletho, njll), kanye nezifo ezivamile (isifo sesibindi, igazi, futhi nezinye oluhambisana diathesis). Iziguli uxilongwe ukuphikelela ukwelashwa follicle unikezwa, luhlose ukunqanda ukopha (ukwelashwa esigabeni sokuqala) nokubuyisa ukuya esikhathini okuvamile (yesibili isinyathelo ukwelashwa). Umsebenzi isinyathelo sokuqala esakhiwa ngo nokucupha ukuguqulwa hyperplastic secretory ku endometrium. Sigaba sesibili sokwelashwa inomthwalo ekuvimbeleni ukopha yansukuzonke futhi ngemijikelezo yokutakula kanye nge-ovulation ingqondo.
Amathiphu ngempumelelo ezimbalwa zendlela ngokushesha ukuthambisa izicathulo ezintsha
Wire iskripthi ku yempesheni yowesifazane